Moxibustion i Chinese unyango amayeza emveli ekukho evuthayo mugwort yomile (moxa) kwiinkalo ezithile emzimbeni. Idlala indima ebalulekileyo kwiinkqubo zonyango yemveli China. Suppliers ngokuqhelekileyo iminyaka mugwort uze usile phezulu ukuya Lutho; iingcali aqhumisele Lutho okanye ukusebenza kuyo nzulu intonga icuba-ezimile. Kokuba isetyenziswe ngokungathanga ngqo, kunye iinaliti lokugqojozwa, okanye aqhumisele ngawo eluswini yesigulane.
Iingcali basebenzisa moxa ukufudumeza imimandla amaza pointswith injongo ekuhlumiseni ejikeleza ngokusebenzisa amanqaku kunye nywa eyayinethombo Ubuthelezi igazi qi. Abanye bakholelwa ukuba esinganyanga iimeko ezinxulumene okanye "kusilela yang" "iqhosha lokulayita" ngesiTshayina Medicine.It ngokuthiwa moxibustion uyakwalela ukuba kunikelwe ukubanda ngamathontsi emzimbeni, kwaye akhonze ukuba iintsana breech.
Iingcali zithi moxibustion ukuba olugqibeleleyo, ngokukodwa kunyango iingxaki ezingapheliyo, "iimeko nokuqhwalela" (ubuthathaka), kunye nokuguga. Bian Que (fl. Malunga nowama-500 BCE), omnye woogqirha abadumileyo semi-edume lidala yaseTshayina kunye yingcali lokuqala moxibustion, yaxoxa inzuzo moxa phezu unyango lokugqojozwa emsebenzini wakhe Classic Bian Que Neijing. Yena wathi moxa enokusenza namandla omtsha umzimba kwaye Ungasusa zombini iimeko abangaphezu kwemfuneko kunye awukho.
Iingcali ungasebenzisa iinaliti lokugqojozwa ezenziwe ngezinto ezahlukeneyo kunye moxa, kuxhomekeke icala aya qi abanqwenela ukuba ukukhuthaza.
Kukho iindlela ezininzi moxibustion. Ezintathu zazo loloyiko ngqo, ngqo non-loloyiko, kunye moxibustion ngqo. Direct loloyiko moxibustion ubeka ikhowuni encinci moxa kwi ulusu endaweni kwincopho lokugqojozwa kwaye utshisa de kumadyunguza eluswini, ngoko leyo yayenze emva kokuba heals.Direct non-umkrwelo moxibustion lususa moxa elivuthayo phambi kokuba ulusu utshisa ngokwaneleyo siva, ngaphandle kokuba moxa sokutshisa eseleyo kwi esikhumbeni elide kakhulu. moxibustion ngokungathanga ibamba icuba lam eyenziwe moxa kufutshane kwindawo lokugqojozwa ukufudumeza esikhumbeni, okanye obambelela kuko kwi inaliti lokugqojozwa kufakwa lolusu libe shushu needle.There kwakhona anamathele-on moxa.
Moxibustion ngandlela enkulu umhlaza nokunyanga, scleroderma, yoma dystrophy, rheumatism, isifo neuron iimoto, udinwe, isifo seswekile, nephropathy, kunye nezinye iintlobo zezifo ezingapheliyo kunye namatyala kakhulu.